Ciidanka oo haya ninkii fuliyey Dilka
15 Feb 15, 2013 - 7:32:40 AM
Ciidamada Amaanka Puntland ayaa soo qabtay gacan ku dhiiglihii fuliyey dilka Shiikh Cadiqaadir Nuur Faarax oo ahaa hogaanka Culimada Puntland.
Shiikha ayaa salaadi casar galabta 15 February,2013 la diley xili uu ku tukanayey Safka 2aad masjidka Al-Badr ee magaalada Garowe oo gurgiisa u dhow,waxana suuro gashay in la qabto Gacan ku dhiiglihii fuliyey dilka isagoona dhaawacay wiil iyo gabar goobta ku sugnaa oo isku dayey dhankooda inay qabtaan.
Kumanaan dad ah ayaa isi soo dhoobey Isbitalka guud ee magaalada Garowe ,waxana dilka Shiikhu noqdey mid naxdin geliyey dadweynaha guud ahaan Puntland.
Shiikh Maxamuud Xaaji Yuusuf oo Marxuumka ka agdhowaa ayaa la hadlay kumaanka dadweyne ee Isbitalka Garowe hortiisa soo istaagey ,waxana uu sidoo kale iclaamiyey xili la duugayo Shiikh Cabdiqaadir.
Shiikh Cabdiqaadir Nuur ayaa caan ka ahaa Somalia iyo Puntland ,iyadoona December 2011 lagu diley Shiikh Axmed Xaaji Cabdiraxman Salaadi subax ka dib Masjid ku yaal magaalada Bossaso.
Maalinta beri ah ayaa lagu wadaa in la aaso Alaha u naxariistee Shiikh Cabdiqaadir Nuur Faarax ,waxana sidoo kale ka soo qaybgali doona Culimo iyo dadweyne ilaa caawa iskaga kala iman doona magaalooyinka Puntland.
Halkan ka dhageyso Codka Shiikh Maxamuud Xaji oo ka hadlaya dilka More Articles
Xasan Sh.oo baaq adag diray